Pacific Group Hotel Group dia mamoaka ny divay misy divay manokana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Pacific Group Hotel Group dia mamoaka ny divay misy divay manokana
Raha jerena voalohany, dia mety tsy ho hitanao ny fitoviana misy eo Gisborne, New Zealand ary ny Nosy Cook tropikaly. Na izany aza, rehefa mijery akaiky ianao dia ho hitanao fa misy fitoviana madiodio; morontsiraka fasika fotsy lava, toetrandro mahafinaritra mahafinaritra, tandavan-tendrombohitra mahavariana, ary ambonin'izany rehetra izany, mponina sariaka izay manao izay farany azony atao mba hahazoana antoka fa tsy hohadinoinao maimaika izany.
Ao amin'ny morontsiraka atsinanana amin'ny nosy avaratr'i Nouvelle-Zélande, Gisborne no faritra fambolena divay lehibe fahefatra ao amin'ny firenena; trano handrahoana ireo mpamokatra divay lehibe, orinasa famokarana bizina ary mpamboly orinasa. Eto ianao no hahita ilay loka sy lozisialy Longbush nahazo loka, orinasa iray manana orinasa miasa sy miasa manokana manandrana divay tsara.
Tamin'ny volana jolay, 2018, Longbush dia niara-niasa tamin'ny Pacific Resort Hotel Group (PRHG) nahazo loka, mba hamokarana divay maromaro hozaraina amin'ny tranony Cook Islands. Tompon'ny Longbush, John Thorp, dia nilaza fa "misy hatrany ny fivoarana vaovao eo amin'ny orinasa, ny toetr'andro samihafa izay misy vokany amin'ny fijinjana sy ny tsena vaovao hizaha".
PRHG sy Longbush dia mankafy ny fifanarahana voajanahary. Ny tandavan'i Gisborne dia manakaiky ny avaratra sy avaratra atsinanana manaloka ny faritra, raha ny toetr'andro maina kosa dia ampamirin'ny rivotra avy any avaratra avy any amin'ny Ranomasina Pasifika amin'ny fahavaratra. Ny tany mando ao Gisborne dia mahasoa indrindra amin'ireto toetr'andro mirindra ireto ary ny vokatra dia tontolo iainana tsara amin'ny fambolena sy famokarana divay kilasy eran'izao tontolo izao.
Miaraka amin'ny traikefa nandritra ny 25 taona mahery tao amin'ny indostria, Thorp dia mitondra traikefa sy fahalalana manan-karena amin'ny famokarana divay manana kalitao. Ny ekipan'i Thorp mpanao divay dia nanamboatra ny tanjaky ny faritra Gisborne mba hamokarana ny elanelana misy an'i Merlot-Rosé, Pinot Gris, ary Merlot ho an'ny vahiny PRHG.
Ny PRHG sy Longbush dia miorim-paka ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy avy ary ny fahatsapana ny fianakaviana dia tafiditra ao anatin'ny mpandraharaha fivarotana butikety. Toa tsy nety ihany ny nanonona ireo divay manodidina ny foto-kevitry ny fiarahamonina; Māua, Nōku, ary Tā'au. I Māua, nadika avy amin'ny Nosy Cook Islands Maori dia midika hoe fananantsika, dia Merlot-Rosé milamina sy mahatalanjona; Nōku, an'ny ahy, dia Pinot Gris mahavariana sy mahay mandanjalanja, raha i Tā'au, anao kosa dia Merlot salama tanora sy mahafatifaty.
Ny faritra dia azo alaina ao amin'ny paradisa kely amin'ny Nosy Cook ary ankafizin'ny vahiny ao amin'ny trano PRHG.
Manatsara ny indostrian'ny fizahantany Atiu ny vokatra vaovao
Laguardia Gateway Partners hanokatra vavahady 11 voalohany amin'ny Terminal B vaovao